Previous Article Mmemme Ekeresimeesi: Ndị Uwe Ojii Ekwe Ndị Anambra Nkwà Ezi Nchekwa
Next Article Ndị Uwe Ojii Anambra Ejidela Mmadụ Anọ Maka Ohi, Ntọntọ Na Ịkwasò Iko n'Iké
Asadu, Ụkọchukwu Ụka Katọlik na Dayọsisi Nsukka, bụ onye nke e kwuru na a tọrọ ya n'ụzọ sitere Imilike gawa Nsukka oge o si nzukọ Dayọsisi ahụ mere na Nnukwu Ụlọụka Theresa dị Nsọ, Nsukka were na-alọta.
Ndị Uweojii nke Steeti ahụ kwuru na ọ bụ ezie nke sitere n'ọnụ òkwú okwu ha, Ebere Amaraizu. O kwuru na ihe gbasara ntọ ahụ edochaghị ha anya ugbua mana ndị Uweojii, agbanyeghị nkea, amalitela ịsụ ọhịa n'ụzọ niile iji were jide ndị omekome ahụ ma gbapụtakwa onye ụkọchukwu ahụ.
Ntọrọ Ụkọchukwu Asadu ga-eweta ọnụ ọgụgụ ndị ụkọchukwu ụka Katọlik atọrọla na Enugwu n'ime ọnwa asatọ rue iteghete. Cheta na Ụkọchukwu Theophilus Ndulue ka a tọrọ na mkpụrụ ụbọchị iri na isii nke ọnwa Nọvemba ma bụrụ onye nke a hapụrụ ka ụbọchị atọ gasịrị oge a kwụrụ ndị tọrọ ya ọkpụrụkpụ ego amaghị.
Otu ụkọchukwu nke achọghị ka akpọọ aha ya, kwuru na ntọrọ ndị ụkọchukwu aghọọla ezigbo ọrụ ugbua nye ndị omekome ebe o nwebeghị otu onye n'ime ha ejidere ma taa ya ahụhụ kwesiri.